တစ်နာရီကိုယ်တော်မြတ်ဖူးရာ ၌ အသုံးပြုနိုင်သော ထောက်ရှုချက်…. | Radio Veritas Asia
တစ်နာရီကိုယ်တော်မြတ်ဖူးရာ ၌ အသုံးပြုနိုင်သော ထောက်ရှုချက်….
(ချစ်လှစွာသော ဘုရားသခင်၏သားသမီးအပေါင်းတို့ ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါလုံး၀ ပပျောက်သွားစေရန်အတွက် ဘုရားကျောင်းသို့သွားရောက် ဝတ်ပြုခြင်းမလုပ်နိုင်သည့်တိုင် မိမိတို့အိမ်တွင်းမှာ သော်လည်းကောင်း၊ ကိုယ်တော်မြတ်ဖူးဆောင်၌သော်လည်းကောင်း အဆင်ပြေသလို တိတ်ဆိတ်စွာဖြင့် ထောက်ရှုဆုတောင်းနိုင်ကြရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ အားလုံးဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။)
မှတ်ချက်။ ။ဤထောက်ရှုချက်သည် သခင် ယေဇူးကိုယ်တော်မြတ်စက္ကရမင်တူးမှပြောလာသော စကား အဖြစ်မှတ်ယူ၍ ၎င်းပါအချက်များကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်။
ယခုသခင်ယေဇူးသင့်ကို စကား ပြောနေသည်ကို နားထောင်ပြီး လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါလော့။
ချစ်သား/ချစ်သမီး ယခုသာမန်မျက်စိနဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ သိကြားတမန်တော်များဟာ သင်နဲ့အတူငါ့ရှေ့မှာ ငါ့ကိုဖူးမျှော်နေတာကိုမြင်ယောင်ပါ။ ငါ့နား မှာဝိုင်းရံပြီးငါ့စိတ်ချမ်းသာစေဘို့၊ ပျော်ရွှင်စေဘို့အတွက် မင်းအနေနဲ့ပညာတတ်ကြီးမဟုတ်လည်း လုပ်လို့ ရပါတယ်။ ချမ်းသာတဲ့လူတစ်ယောက်မဟုတ် လည်းရပါတယ်။ မင်းငါ့ကိုစိတ်ချမ်းသာစေချင်ရင်၊ ပျော်ရွှင် စေချင်ရင် ငါ့ကိုချစ်ရင်ရပြီ။ ငါဟာ ကိုယ်ချင်းစာတတ်ပါတယ်။ လူသားတစ်ယောက် ထက်ပိုပြီး လူတွေကို ကိုယ်ချင်းစာတတ်သလို မင်းရဲ့ဒုက္ခအားလုံးကိုခံထမ်းနိုင်အောင်၊ ဒါမှမဟုတ် ပယ်ရှားလိုလျှင်လည်း ငါပယ်ရှားပေးလို့ရပါတယ်။ ကျမ်းစာထဲမှာလည်း ငါ့အတွက်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာ ဘာမှမရှိဘူးလို့ငါပြောထား သလို ငါနဲ့ကင်းလျှင် သင်ဘာမျှ မတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာလည်းပြောပြထားပြီး။ ငါ့ပါးစပ်နဲ့ပြောရုံမကဘူး၊ အံ့ဘွယ်ရာအနေနဲ့ပါ အကြိမ်ကြိမ်အခါခါပြခဲ့ပါတယ်။
ဥပမာ- ရေကနေ စပျစ်ရည်ဖြစ်စေတဲ့အံ့ဖွယ်ရာ၊ မုဆိုးမသားကိုပြန်ရှင်စေတဲ့ဖြစ်ရပ်၊ လာဇရူးကို ရှင်ပြန်စေတဲ့ကိစ္စ၊ ပေါင်မုန့်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင် ကိုလူငါး ထောင်ကိုကျွေးပြတဲ့အံ့ဖွယ်ရာတွေအပြင်၊ လူတွေစိတ်ကူးနဲ့တောင်စဉ်းစားလို့မရတဲ့ သဘာဝထက် လွန်ကဲတဲ့အံ့ဖွယ်ရာတွေ အများကြီးပြသခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုပြောပြ၊ လုပ်ပြတာဟာ မင်းငါ့အပေါ်မှာယုံကြည်မှု ပိုရှိလာစေဘို့၊ မင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအထောက် အကူပေးဘို့အတွက်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ “သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်း သည်သင့်ကိုကယ်တင်ပြီ” ဆိုတဲ့စကားသံကိုလည်း ကျမ်းစာထဲမှာမင်းခဏခဏ ကြားမှာပါ။ ငါ့ကိုယုံကြည်တဲ့သူအတွက် မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဘာမှမရှိဘူး ဆိုတာလည်း ငါပြောပြခဲ့ပါတယ်။
သံမာရ်ကူး (၉း ၁၄-၂၉) မှာပါတဲ့နတ်ဆိုးဖမ်းစားတဲ့သူကို နတ်ဆိုးမောင်းထုတ် တဲ့ဖြစ်ရပ်မှာလည်းတွေ့ရမှာပါ။ ဒါကြောင့် အခုငါ့ကို ဖူးမျှော်တဲ့အချိန်မှာ ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ရှိခိုးဖူးမျှော်ပါ။ မင်းရဲ့စိတ်ပေါ့ပါးမှုကိုရစေမှာပါ။ နောက်တစ်ခု ပြောချင်တာက ကျမ်းစာတော်မြတ်မှာပြောထားသလို “ငါသည်သင်တို့ကိုချစ်သကဲ့သို့သင်တို့ အချင်းချင်း ချစ်ကြလော့။”
“ငါမင်းကို ဘယ်လောက်ချစ်သလဲဆိုရင် မင်းကယ် တင်ခြင်းရဘို့ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံသည့် တိုင်အောင်" ချစ်တယ်ဆိုတာ မင်းအသိဘဲဖြစ်ပါတယ်။ မိမိအဆွေအတွက် မိမိအသက်ကို ပေးသောမေတ္တာ ထက်ကြီးသောမေတ္တာမရှိ၊ လို့လည်း ငါပြောထားတာ ကိုမင်းသတိရမှာပါ။
ဒါကြောင့် ငါမင်းကိုဘယ်လောက်ချစ်သလဲ ဆိုတာပြန်စဉ်းစားပြီး ငါရဲ့ချစ်ခြင်းကိုယုံကြည်ပါ။ ငါလည်း မင်းဆီကချစ်ခြင်းကိုလိုလည်းမျှော်လင့် ပါတယ်။ နောက်ပြီးတခြားသော သူတွေကိုလည်း ငါချစ်သလိုချစ် စေချင်ပါတယ်။ ချစ်ရင်ဒုက္ခခံတယ်။ ဆိုတဲ့စကားလည်းရှိပါတယ်။ တကယ်တမ်းချစ်ပြီ ဆိုရင် ကိုယ်ချစ်တဲ့သူအတွက်ဒုက္ခခံဘို့အမြဲတမ်း အဆင်သင့်ဖြစ်နေခြင်းဟာ၊ ချစ်ခြင်းရဲ့စစ်မှန်တဲ့ သက်သေပဲဖြစ်ပါတယ်။ မင်းစဉ်းစားကြည့်ပါ။ မင်းတကယ်ချစ်တဲ့သူအတွက်မင်းဒုက္ခခံဘို့၊ အပင်ပန်းခံဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်တယ်မဟုတ်လား။ မင်းချစ်တဲ့သူအတွက်ဘာကူညီပေးရမလဲဆိုတာ အမြဲစဉ်းစားနေသလိုငါလည်းမင်းကိုဘယ်လိုကူညီ ရမလဲဆိုတာငါအမြဲစဉ်းစားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လူတွေကို လွတ်လပ်မှုပေးထားသလို လူတွေဆီက ဆန္ဒပါပါနဲ့ တောင်းဆိုဘို့ကိုတော့ငါတောင်းဆိုတယ်။
သေးခင်မှာ တခြားသူတွေအတွက် မင်းဘာတောင်းပေးချင်သလဲ။ မင်းရဲ့မိသားစုကနေစရင်ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။
မင်းရဲ့အစ်ကို (နာမည်) အတွက်ကော ဘာတောင်းပေးချင်သလဲ။
မင်းရဲ့အစ်မ (နာမည်) အတွက်ကောဘာတောင်းပေးချင်သလဲ။
မင်းရဲ့ညီမ (နာမည်) အတွက်ကော ဘာတောင်းပေးချင်သလဲ။
မင်းရဲ့ညီ(နာမည်) အတွက်ကော ဘာတောင်းပေးချင်သလဲ။
(၁) ဤနေရာ၌မိမိဆုတောင်းပေးစေချင်သောသူကိုမြင်ယောင်ပြီး အချိန်ယူကာဆုတောင်းပေးရန် ဖြစ်သည်။
(၂) ဆုတောင်းပြီးသော အချိန်၌ (ကောင်းကင်ဘုံ ၊ သားတော် ဂုဏ်ကျေးဇူးတော် + ခမည်းတော် ) ဆိုရန်။
(၃) ဖြစ်နိုင်ပါက (ဓမ္မသီချင်းတစ်ပုဒ်) လည်းဆက်သီဆိုနိုင်ပေသည်။
မင်းမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့၊ ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်နေသူတွေ (အမည်သိလျှင်အမည်ခေါ်ပြီး) ဆုတောင်းပေးပါ။ မင်းဘာဆုတောင်းပေးချင်သလဲ။ အဲဒီနေရာမှာ သင်သတိရသလောက်၊ မှတ်မိသလောက်၊ ဆင်းရဲတဲ့သူ တွေ၊ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေရဲ့မျက်နှာတွေကိုမြင်ယောင်ပြီး၊ တောင်းပေးချင်တဲ့ဆုကို တောင်းပေးဘို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးသင်သိရှိတဲ့ ရောဂါဝေဒနာရှင်တွေအတွက် ဆုတောင်းပေးစေချင်တယ်။ ဆေးရုံမှာလား၊ အိမ်မှာလား၊ လမ်းဘေးမှာလား၊ ဘယ်သူတွေအတွက်ဘာဆုတောင်းပေးချင်ပါသလဲ။ (အချိန်ယူပြီး စဉ်းစားပါ။ နာမည်ခေါ်ပြီးဆုတောင်းပေးပါ)
ဆက်လက်ပြီး အပြစ်နွံထဲမှာနှစ်မွန်းနေတဲ့ မင်းသိတဲ့သူတွေ အတွက်လည်း ဆုတောင်းပေးပါ။ လောကရဲ့ ဆွဲဆောင်မှု၊ အသွေးအသားနှောင့်ယှက်မှု၊ နတ်ဆိုးရဲ့အနိုင်ကျင့်မှုတွေကို မရုံးကန်နိုင်တော့ပဲ၊ လူတွေရဲ့ ဆုတောင်းပေးမှုများစွာ လိုနေတဲ့သူတွေရှိနေပါတယ်။
၎င်းပြင် မူးယစ်ဆေးဝါး၊ အရက်သေစာရဲ့အနိုင်ယူမှုခံနေရတဲ့သူတွေ။ တချို့လူတွေ၊ အပြစ်ကိုအပြစ်မှန်း မသိဘဲလုပ် နေကြတဲ့သူတွေ အတွက်လည်းဆုတောင်းပေးပါ။ တချို့လူတွေမိမိအင်အားနဲ့မရုံးထွက် နိုင်ဘဲဝိုင်းဝန်းဆွဲထူမဲ့လူ၊ ဆုတောင်းကူညီမှုမရလို့ အပြစ်နွံထဲမှာ နှစ်မွန်းနေကြရတဲ့ လူတွေအတွက်လည်း ဆုတောင်းပေးပါ။ ဘယ်သူတွေလဲ ၊ ဘယ်မှာနေလဲ ဘာဖြစ်နေလဲ၊ ဘာဆုတွေတောင်းပေးချင်သလဲ။ တခြားသူများအတွက် ဘာဆုတောင်းပေးချင်သလဲ။
ဥပမာ။ ။ ဘာသာရေးလုပ်နေတဲ့သူတွေ၊ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးစသည်တို့ လုပ်နေတဲ့သူတွေအတွက် ဆုတောင်းပေးနိုင်တယ်)
ယခု အထက်ပါရည်ရွယ်ချက်အတွက် (ကောင်းကင်ဘုံ + ဂုဏ်ကျေးဇူးတော် + ခမည်းတော်သားတော်) ဆိုပေးပါ။ (ပြီးရင်ဓမ္မသီချင်းတစ်ပုဒ်လည်းဆိုလို့ရပါတယ်)
အခုသင့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေ ပြင်ဆင်ပေးဘို့အတွက်ဆုတောင်းရမဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်မှာဘာအား နည်းချက်တွေရှိပါသလဲ။ ပညတ်တော်ဆယ်ပါး၊ ကျင့်ဝတ်ခြောက်ပါးကိုအခြေခံပြီးမိမိရဲ့ အားနည်းချက် တွေကိုရှာဖွေလို့ရပါတယ်။
စက္ကရမင်တူးနှင့်ပါတ်သက်တဲ့အားနည်းချက်တွေ၊ ဘာသာရေးဝတ္တရားနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ အားနည်းချက်တွေ၊ သင့်မှာအားနည်းချက်တွေ အပြစ်တွေရှိလို့ စိတ်ဓါတ်ကျမနေနဲ့။ သင်ပြုခဲ့တဲ့အပြစ်မျိုး တွေလိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး နောင်တွင်နောင်တရပြီး ပြန်ကြိုးစားတဲ့လူတွေ ရဟန္တာဖြစ်သွားတာ အများကြီးရှိပါတယ်။ ငါလည်း မင်းပြောင်းလဲ မဲ့အချိန်ကိုပဲ စောင့်မျှော်နေပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး မင်းရဲ့ဘဝအောင်မြင်ဘို့အတွက် ဘာဆုတွေတောင်းချင်သေးလဲ။
မင်းရဲ့အကြီးအကဲတွေအတွက်ရော။ မင်းရဲ့တိုင်းပြည်မြို့ရွာအကြီးအကဲတွေတွက်ရော၊ ဘာတောင်းပေး ချင်သလဲ။ (သူတို့နာမည်ကိုသိရင်ခေါ်ပြီးဆုတောင်းပါ။)
မင်းရဲ့ဝိညာဉ်ရေးအတွက်ဘာတောင်းချင်သလဲ။ မင်းရဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေ၊ မအောင်မြင်မှုတွေကို ငါ့ကိုပြောပါ။ မင်းဘာဆုတောင်းချင်ပါသလဲ။ မင်းမှာစိတ်အနှောင့်အယှက်တွေကော ရှိသလား။
ငါ့ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြပါ။ ငါကူညီပေးနိုင်တယ်။ ကူညီပေးမယ်ဆိုတာကိုလည်းယုံပါ။ ငါဟာလူသား တစ်ယောက်စီအပေါ်လည်း သနားခြင်းစိတ်အပြည့်အဝရှိသလို လူသားတစ်ယောက်စီရဲ့ခံစားချက်တွေကို လည်းငါနားလည်တယ်။ လာဇရူးသေဆုံးတုံးကလည်း သူ့မိသားစုနဲ့အတူ ငိုကြွေးခဲ့ရသေးတယ်။ ဂျေရုဇ လင်မြို့ပျက်ခါနီးမှာလည်း ငါမျက်ရည်ကျခဲ့ရတယ်။ အဲဒီဖြစ်ရပ်တွေဟာ ငါ့ရဲ့သနားခြင်း၊ ကိုယ်ချင်းစာ ခြင်းတွေကို ဖေါ်ပြတာဘဲဖြစ်တယ်။ မင်းမှာကြောက်ရွံ့စရာ၊ စိုးရိမ်စရာတွေကောရှိသလား။ ပြောပြပါ။ ကျမ်းစာမှာလည်းငါပြောထားတယ်။ သင်စိုးရိမ်လို့သင်ရဲ့ စိုးရိမ်စိတ်ကြောင့် သင့်ရဲ့အရပ်ကို တစ်တောင် တိုးရှည်အောင်လုပ် လို့မရပါဘူးလို့ပြောထားတယ်။ သတိပေးထားပါတယ်။ စပါးကျီမရှိတဲ့ စာကလေးတွေတောင်နေ့စဉ်စားဘို့အစာ ငါပေးထားတယ်။ ခဏပဲပွင့်ပြီးခြောက်သွားမဲ့ပန်းတွေလည်း ငါလှလှ ပပဝတ်ဆင်ထားပေးတယ်ဆိုရင် စာငှက်ထက်များစွာတန်ဖိုးရှိတဲ့၊ မြက်ပင်ထက်များစွာ တန်ဖိုးရှိတဲ့မင်းကို ငါမပစ်ထားပါဘူး။ လူဆိုတာ အိုရမယ်၊ နာရမယ်၊ နောက်ဆုံးတော့ သေကြရမှာပဲ။ ဒါကတော့ကျော် သွားလို့မရဘူးလေ။ ဒါပေမဲ့ အရေးကြီးတာက ငါ့ဆီကငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ခွန်အားပဲ။ နာလည်းပျော်ပျော်နာနိုင်ဘို့၊ အိုလည်းပျော်ပျော်အိုနိုင်ဘို့၊ သေလည်းပျော်ပျော်သေနိုင်ဘို့ဆိုရင် အတွင်းငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ အတွင်းခွန်အား၊ ဝိညာဉ်ခွန်အားပဲအရေးကြီးတယ်။ ဒါတွေကိုတောင်းဖို့မမေ့နဲ့အုံး။ ငါပေးတဲ့ငြိမ်သက် ခြင်းဟာ လောကပေးတဲ့ ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့မတူဘူး။ အိုလည်းပျော်စေနိုင်တယ်။ နာလည်းပျော်စေနိုင်တယ်။ သေခါနီးလည်းပျော်စေနိုင်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းပါပဲ။ ကိုယ်တော်မြတ်ဆီမှာ “အလင်း” ကျေးဇူးတော် တောင်းခံဘို့မမေ့ပါနဲ့။ လူတိုင်း၌ဘုရားကိုတွေ့နိုင်ပြီး၊ ဖြစ်ရပ်တိုင်း၌ဘုရားရဲ့အလိုတော်ကို မြင်တွေ့နိုင်ဖို့ ဆုတောင်းပါ။
ဥပမာ -အမြင်ခြင်းမတူတဲ့သူနှစ်ဦးရဲ့ကွာခြားမှုလိုပါဘဲ။ လူတစ်ဦးက “ငှက်” ကိုကြည့်ပြီးလေးခွနဲ့ပစ်စားဖို့ တွေးပေမယ့်၊ သိပ္ပံပညာရှင်အတွေး၊ ကောင်းတဲ့လူက “ငှက်” ကိုကြည့်ပြီး လေယာဉ်ပျံတွေ၊ ဒုံးပျံတွေကို ဆောက်လုပ်တဲ့နည်းပညာတွေရရှိသွားပါတယ်။ ထိုနည်းတူ လူတစ်ယောက်က ရေထဲက “ငါး” ကိုကြည့် ပြီးမျှားစားဘို့စဉ်းစားပေမယ့်၊ သိပ္ပံပညာရှင်ကတော့ “ငါး” ကိုကြည့်ပြီး၊ သင်္ဘောတို့၊ ရေငုတ်သင်္ဘောတို့ ဆောက်လုပ်ဖို့နည်းလမ်းရသွားတယ်။ တချို့သောသူတွေက “ဒုက္ခ” တွေကို ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ စိတ်ဓါတ်ကျငြီးငြူပေမယ့်၊ တချို့ကျတော့ “ဒုက္ခ”ရောက်တဲ့အခါမှာ “ငါသခင်ယေဇူးရဲ့ ကားတိုင်ကိုစီမုံစေရေနေဦးလိုဝေမျှထမ်းခွင့် ရပါလား။” ဆိုပြီး ဓမ္မသီချင်းဆိုပြီး မိမိကားတိုင်ကို နေ့စဉ်ပျော်ပျော်လေးထမ်းသွားတယ်။ တချို့ကတော့ အခက်အခဲကို “ဒုက္ခ” လို့မြင်ပေမယ့် တချို့ကတော့ “ဒုက္ခ” ကို အခွင့်အရေးလို့မြင်တယ်။ ဒါကြောင့်ခွန်အားကျေးဇူးတော်နဲ့ အလင်းကျေးဇူးတော်ကိုအမြဲတောင်းခံပါ။
ဆက်ပြီးတော့ငါ့ကိုဝမ်းသာစရာစကားများပြောဘို့ ရှိသေးသလား။ မင်းဆီကဝမ်းသာစရာ စကားတွေ လည်းကြားချင်တယ်။ လူရဲ့သဘာဝဟာ၊ ဒုက္ခအခက်အခဲတွေရှိလာရင် ကျေးဇူးတော်မြင်တွေ့နိုင်ဖို့ ခက်တတ်ပါတယ်။ စဉ်းစားပြီးတစ်ခုစီပြောပါလား။ ဒီဝမ်းသာမှုတွေက ငါ့ဆီကရတဲ့အရာတွေဖြစ်လို့ ငါ့ကိုကျေးဇူးတင်တို့မမေ့နဲ့ပေါ့။
(ကောင်းကင်ဘုံ + ဂုဏ်ကျေးဇူးတော် + ခမည်းတော်)
နောက်ဆုံးကျန်တဲ့အချိန်လေးမှာ တိတ်ဆိတ်စွာငါ့ကိုဖူးမျှော်ရင်း တစ်နာရီကို အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်။
ဖာသာရ် ပီတာ ကြည်မောင် အာရ်ဝင်းတူးကာလ ပထမ တနဂ်နွေနေ့ ဩဝါဒ နိုဝင်ဘာလ ၂၈၊ ၂၀၂၁
နိုဝင်ဘာ (၂၁) ခရစ္စတူးဘုရင်ပွဲနေ့
ဖာသာရ် ဩဂတ်စတင်း တင်မောင်ထွန်း (၃၄) ကြိမ်မြောက် တနဂ်နွေနေ့ (ယေဇူး ဘုရင်ပွဲတော်နေကြီး) ဩဝါဒ နိုဝင်ဘာလ ၂၁၊ ၂၀၂၁